DAAWO: Salaad Cali Jeelle oo doonaya Duqa Muqdisho & Fahad Yasiin oo ka hortaagan.
July 31, 2019 NEWS 3
MUQDISHO(P-TIMES)- Lataliyaha Madaxweynaha Soomaaliya ee hadda Salaad Cali Jeelle ahna mid kamid ah xubnaha sida daran xukuumadda uga difaaca Mucaaradka kasoo horjeeda ayaa hadda doonaya in loo magacaabo gudoomiyaha gobalka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho.
Salaad wuxuu horey u soo noqday wasiir kuxigeenka wasaaradda Gaashaandhiga ee Soomaaliya, waana mid kamid ah siyaasiinta sida adag uga soo horjeeda fikradaha la xariira kooxaha Islaamiyiinta ee Soomaaliya.
Odayaasha beesha Mudulood, gaar ahaana Abgaal oo habeen kahor kulan gaar ah la yeeshay Madaxweynaha Soomaaliya, ayay kaga wada hadleen sidii booska Eng Yariisow loogu magacaabi lahaa siyaasi ay beeshaasi keensato.
Warar hoose oo laga helayo magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Salaad oo mar horeba arrintan isku diyaariyey, wuxuuna isku arkaa siyaasiga xiligan Beeshaas kasoo jeeda ee Madaxweyne Farmaajo aamini karro.
Laakiin Fahad Yaasiin ayaa u arka magacaabida Salaad Cali Jeelle in ay noqon karto caqabad weyn oo ku timaada Madaxtooyada iyo qorshaheeda doorashada 2021-ka, waxaana taasi ay tahay caqabada ugu weyn ee waqtigan taagan.
Gobalka Banaadir ayaa ah Isha dhaqaale ee ay ku tiirsan tahay dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, waxaana dhawaan weerar lagu qaaday gudaha Xaruntaas dhaawacyo iyo dhimasho ay kasoo gaartay madaxdii gobalka Banaadir.
Axmed Madoobe in ka badan 7 Sano ayuu jooga Kismaayo.
Soomaalidu waxaay tiraahdaa ” Hal Booli ah Nerig Xalaal ah ma Dhasho”
Axmed Madoobe Taariikh qurux badan ma lahan, waa nin ku caan ah Ururo Diimeed isku sheega, Marba koox buu iskugu bedbedelijirey ka mid noqoshadooda, Ururadaas waxaa hadda ugu dambeeya waa Ururka hadda u diyaarsan Gumaadka Shacabka Soomaaliyeed mid yar iyo mid weyn iyo burburinta Hantidooda, weliba si naxariis darro ayey u xasuuqaan dadka Soomaaliyeed.
Waa wax xanuun badan runtii in dadka Soomaaliyeed loo xasuuqo sabab la’aan,
Axmed Madoobe ma ahan nin nadiif ka ah sida lagu Xanto waayo meel uu kaga noqday Fekerka Xagjirka ah ee dadka Soomaaliyeed lagu xasuuqo sida joogtaa ah, sidoo kale Axmed Madoobe waxaa hadaladiisa laga dareemi karaa sida Ururka Alsheydaan, waana kooxihii uu ka Midka ahaan jirey.
Waxaaba intaas ka daran Axmed Madoobe waa nin u raran Kenya 100%, Axmed Madoobe haddii uu sii joogo Goboladaan Jubbooyinka loogu magac daray inuu Kenya Hoos Geeyo, haddii ay u suurto geli laheyd
Marka laga hadlaayo sida Kenya u dooneyso iney boobto qaybo ka mid ah Badda Soomaaliya, iyo sida ay ugu soo xadgudbeyso gudahaba u soo gelisey Derbiga ay ka dhidayso Xuduud Beebaadka Labada dal waa Soomaaliya iyo Kenya ee Gumeysigji Ingiriisku sameeyey, Axmed Madoobe wuxuu si aan gabasho laheyn u garab taagan yahay Kenya taas waa wax la wada og yahay.
Marka la isku soo koobo Axmed Madoobe ma lahan Taariikh Qurux badan, sida uu ku yimid Kismaayo iyo cidda weli ku haysa waa la og yahay.
Xoog ciidan ee Kenya ayuu ku yimid Kismaayo, in la yiraahdo waxaad tahay Madaxweyne Jubbaland waxaa ku magacaavay Ethiopia, taariikhdu waa qoran tahay iyadaana isa sheegta, qofba sida uu doono uma qoran karo.
Sidaa awgeed Axmed Madoobe hana dhaafo, sidaas baan u rajeynayaa, wax kale uma hayo.
Salaad Cali Jeele waxuu ka fiican yahay dhankastaba dad badan oo xilal ka haya xamar.Waana nin lagu yaqaan hawlkarnimo joogto ah.Waa nin la yiraahdo runta lama gabado.Sida la sheego waa nin ka fog musuq-maasuqa iyo lunsashada maalka ummada.Waa nin meeshii uu joogo laga arko wax qabad cusub.Waana nin diimeed oo ku fiican ku dhaqanka Diinta Islaamka.Waa nin soomaali meel ay dagan yahiinba aad u kala yaqaan.Waayo salaad waxuu ka mid ahaan jirey mudo dheer jabhaddii SNM.